चैत महिनाको भाडा लिने घरबेटीको तत्काल यसरी सूचना दिनुहोस् : सरकारले कारबाही गर्छ – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/चैत महिनाको भाडा लिने घरबेटीको तत्काल यसरी सूचना दिनुहोस् : सरकारले कारबाही गर्छ
काठमाडौ । चैत महिनाको भाडा लिने घरधनीलाई सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ ।मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले सबै घरधनीलाई चैतको भाडा नलिन आग्रह गरेको थियो । भाडा माग्ने घरबेटीको सूचना सरकारलाई दिनुपर्ने र त्यस्ता घरधनीलाई सरकारले कार्बाही गरेर बहालमा बस्नेलाई रकम उपलब्ध गराउँने भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्रीमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशैभरिका घरधनीलाई चैत्र महिनाको भाडा नलिन आग्रह गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले भाडा लिने घरधनीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘सरकारले सबै घरधनीलाई चैत महिनाको भाडा नलिन आग्रह गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ यो घरनीलाई सरकारले कर छुट गरेको छ ।
अर्थमन्त्रि तथा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडा ।
त्यही भएर एक महिनाको भाडा नलिन भनिएको हो । सरकारको निर्णय र आग्रह बेवास्ता गरी भाडा लिए त्यस्ता धरधनीलाई सरकारले एक्सन लिन्छ ।’ मन्त्री खतिवडाले एक महिनाको भाडा नलिँदैमा घरधनी टाट पल्टिने अवस्था नरहेको समेत बताउनु भयो ।